ပရိသတ်တွေကို ဖြူဖြူကျော်သိန်းက ဒဲ့ဝန်ခံပြီး ဒဲ့ချပြလိုက်တဲ့ သူမရဲ့ချစ်သူစုံတွဲပုံလေးတွေ – Online News Post
ပရိသတ်တွေကို ဖြူဖြူကျော်သိန်းက ဒဲ့ဝန်ခံပြီး ဒဲ့ချပြလိုက်တဲ့ သူမရဲ့ချစ်သူစုံတွဲပုံလေးတွေ
လူတိုင်း က နှစ်သစ်မှာ ကိုယ်ချစ်ရ တဲ့သူနဲ့ပဲဖြတ်သန်းချင် ကြ ပါ တယ် ။ ၂၀၂၁ ရဲ့ ပထမ ဆုံး နေ့ရက်မှာ ဖြူဖြူက တော့ ကျော်ထက်အောင် နဲ့ အတူရိုက် ထားတဲ့ ရိုဆန်ဆန် ပုံလေးတွေကို ချပြလိုက် ပါပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်း က နှစ်ယောက်အတူ MTV လေးတွေ တွဲရိုက်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို အခိုင် အမာရ ရှိခဲ့ သူတွေပါ ။
ဒီနေ့မှာ လည်း အင်္ကျီ အရောင် ဆင်တူလေး တွေနဲ့ ကြည်နူး စရာ ကောင်းလွန်း တဲ့ စုံတွဲ ပုံလေးတွေ ဟာ ပရိသတ် တွေကို အံ့အား သင့်စေခဲ့ ပါတယ် ။ တကယ့် ချစ်သူစုံတွဲ တွေလို ပြုမူနေ တဲ့ပုံလေးတွေ ဟာ နှစ်ယောက် သား တကယ်များ ချစ်သူ ဖြစ်နေကြ ပြီလား လို့ သို့လော သို့လောထင် စရာ ပါပဲ ။
ဒီလို ပုံလေးတွေ ကို ” အချစ် စစ်လား အချစ် တုလားဆို တာ နှလုံးသား ကပဲ မြင်နိုင် တာ တကယ်ကို အချစ်ရှိ တယ် Happy New Year to all our fans. Phyu Phyu & Kyaw Htet. ” ဆိုပြီး တင်ထား တာပဲဖြစ်ပါတယ် ။ နှစ်ယောက်သား တကယ်ပဲ တွဲဖြစ်ခဲ့ရင် ပရိသတ်ကြီး ရဲ့ အမြင်ကို လည်း မှတ်ချက်လေး ပေးခဲ့ ပါဦးနော် …
photo : Phyu Phyu Kyaw Thein
လူတိုင္း က ႏွစ္သစ္မွာ ကိုယ္ခ်စ္ရ တဲ့သူနဲ႔ပဲျဖတ္သန္းခ်င္ ၾက ပါ တယ္ ။ ၂၀၂၁ ရဲ့ ပထမ ဆုံး ေန႔ရက္မွာ ျဖဴျဖဴက ေတာ့ ေက်ာ္ထက္ေအာင္ နဲ႔ အတူရိုက္ ထားတဲ့ ရိုဆန္ဆန္ ပုံေလးေတြကို ခ်ျပလိုက္ ပါၿပီ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကတည္း က ႏွစ္ေယာက္အတူ MTV ေလးေတြ တြဲရိုက္ခဲ့ၿပီး ပရိသတ္ေတြရဲ့ အားေပးမႈကို အခိုင္ အမာရ ရွိခဲ့ သူေတြပါ ။
ဒီေန႔မွာ လည္း အကၤ်ီ အေရာင္ ဆင္တူေလး ေတြနဲ႔ ၾကည္ႏူး စရာ ေကာင္းလြန္း တဲ့ စုံတြဲ ပုံေလးေတြ ဟာ ပရိသတ္ ေတြကို အံ့အား သင့္ေစခဲ့ ပါတယ္ ။ တကယ့္ ခ်စ္သူစုံတြဲ ေတြလို ျပဳမူေန တဲ့ပုံေလးေတြ ဟာ ႏွစ္ေယာက္ သား တကယ္မ်ား ခ်စ္သူ ျဖစ္ေနၾက ၿပီလား လို႔ သို႔ေလာ သို႔ေလာထင္ စရာ ပါပဲ ။
ဒီလို ပုံေလးေတြ ကို ” အခ်စ္ စစ္လား အခ်စ္ တုလားဆို တာ ႏွလုံးသား ကပဲ ျမင္နိုင္ တာ တကယ္ကို အခ်စ္ရွိ တယ္ Happy New Year to all our fans. Phyu Phyu & Kyaw Htet. ” ဆိုၿပီး တင္ထား တာပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ႏွစ္ေယာက္သား တကယ္ပဲ တြဲျဖစ္ခဲ့ရင္ ပရိသတ္ႀကီး ရဲ့ အျမင္ကို လည္း မွတ္ခ်က္ေလး ေပးခဲ့ ပါဦးေနာ္ …
Previous post သီချင်းလေးနဲ့အတူ လှပတဲ့အတွင်းသားအလှလေးတွေကို အမိုက်စားလေးထုတ်ပြလိုက်တဲ့ သဇင်ဦးရဲ့ Tik Tokဗီဒီယိုဖိုင်
Next post ကျစ်လစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေး ကို သေချာလေးပြထား တဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို တင်လိုက်တဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်း